Imizekelo yokubhala | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | 26/04/2022 21:19 | Idizayini yeMifanekiso
Njengoyilo lwegraphic, Kuya kufuneka wazi iintsingiselo kunye neefashoni zangoku ukwazi ukunika abathengi bakho inkonzo ngokwento abayithathileyo (okanye baya kuyithatha). Kule meko, ukubhala kuzuza kakhulu udumo kwiimpawu kunye neenkampani. Ke, singakubonisa njani imizekelo yokubhala?
Ukuba awukayazi indlela yokuyisebenzisa kwinkampani, okanye ucinga ukuba ayinakusetyenziswa nangayiphi na indlela, siza kukwenza ukuba utshintshe ingqondo yakho. Qwalasela.
1 Yintoni ileta
1.1 Ukubhala ngoonobumba, ukuchwetheza kunye necalligraphy
2 imizekelo yokubhala
2.3 Imizekelo yokubhala kwiimagi
2.5 Imizekelo yokubhala kwiibhari nakwiindawo zokutyela
Into yokuqala esiza kuyenza kukuphonononga iziseko zokubhala kwaye, ngenxa yoku, siqala ngenkcazo yayo. Ichazwa njengobuchule bokuzoba apho, endaweni yokuzoba imifanekiso (izilwanyana, imilo, abantu...) into eyenziwayo kukupeyinta oonobumba ngesandla. Kodwa ngamnye wabo unemilo enomdla kunye neyodwa. Azilingani enye kwenye kodwa zineempawu zazo ezibenza bazimele geqe omnye komnye, nokuba inobumba omnye.
Ngamanye amazwi, indlela yokubhala ngumsebenzi ozoba ngawo oonobumba, ubanike umbono phantse ngokungathi ngumfanekiso, umzekeliso ngokwawo, kwaye akuyomfuneko ukuba iifoto okanye imifanekiso ibonakale kuba yona ngokwayo yanele yaye ishiyekile.
Ukubhala ngoonobumba, ukuchwetheza kunye necalligraphy
Nangona usenokucinga ukuba omabini la magama anokubhekisela kwinto enye, eneneni akunjalo. Ukubhala, ukuchwetheza kunye ne-calligraphy, nangona bekhankanya iileta, indlela abenza ngayo yahluke ngokupheleleyo nganye. Uza kubona:
Yintoni eyenziwa yi-typography kukuyila oonobumba. Kodwa zonke ziyafana Akukho mahluko phakathi kwabo, hayi naphakathi konobumba abafanayo.
I-Calligraphy ichazwa njengobugcisa "bokubhala kakuhle". Oko kukuthi, ibhalwe ngendlela ethile yokwenza ukuba oonobumba babonakale bebahle, kodwa bahlala apho. Ayiziguquleli xa sele zibhaliwe ukuzihombisa.
Kwaye ukubhala kukuzoba iileta kunye yenza nganye yahluke kwaye itsale umdla.
Ukubone oku, sinokuthi ubumbano sesinye isigaba se-calligraphy. Kuhle ukubhala, kodwa nokuguqula oonobumba ukuze oonobumba babukeke njengemifanekiso (oonobumba okanye amagama).
Ukwazi oku ngasentla, sele unesiseko esincinci malunga nokubhala, ngokwaneleyo ukuqonda ngezantsi kwemizekelo eyahlukeneyo yokubhala esiyifumene kumnatha. Ngoko uya kubona ukuba isondele kangakanani kunokuba ucinga kwaye uya kuba nakho ukunika esinye isindululo kubaxumi esinokuthi sibe nempumelelo ngakumbi kunye nokwamkelwa luluntu.
Usenokungakhumbuli, kodwa inyaniso kukuba uphawu olukhulu njenge I-Ikea isebenzise kwiintengiso zabo.
Ngokukodwa, intengiso "Masigcine isidlo sangokuhlwa", apho ubona incwadi ijika amaphepha kwaye usebenzisa unobumba kumagama okanye amabinzana athile apho ufuna ukugxila kancinci.
Ke unokubona ukuba sithetha ngantoni, nasi isibhengezo:
Ezi zishunqulelo zihambelana nendawo yokutyela ephilayo. Isaci salo sithi "Green, I love you green" kunye ucele umyili uLisa Nemetz uncedo lokwenza imilo eyahlukileyo yeelogo zabo. Ukuza kuthi ga ekufumaneni into ebebeyikhangela kubhalo.
Ukuba uyayibona, yiya inyaniso ayinayo imfihlakalo ingako. I-logo enemvelaphi eluhlaza okanye emnyama, enomfanekiso ongenakuxatyiswa ngokupheleleyo, kwaye, ngaphezu kwabo, amagama aluhlaza ukuba ndiyakuthanda eluhlaza, i-VQV.
Zibhalwe ngoonobumba kwaye azikho ngokusesikweni kwaye kwangaxeshanye zinamandla anjalo ikwenza ufune ukwazi ngakumbi malunga nale restyu.
Imizekelo yokubhala kwiimagi
Jonga nje iimagi, umzekelo kwiAmazon, ukufumana imizekelo emininzi yokubhala kuzo. Ziyilo ezingayifuniyo imifanekiso, kwaye ngamanye amaxesha ingabikho nemibala, ukuba igqame kuba ngoonobumba ngokwabo baba yimizobo.
ngamanye amaxesha pZinokukhatshwa yimizobo ethile imvelaphi, okanye emacaleni, ukubenza babe nomtsalane ngakumbi, kodwa basebenza ngasemva. Eyona nto ibalulekileyo ngabo nobumba, amagama namabinzana.
Omnye wemizekelo yokubhala esikunika yona usithatha usithatha UBryan Patrick Todd, umyili wemizobo wanikwa umsebenzi weprojekthi eludongeni ukuze apapashe inkampani. Yaye kambe ke, wayesebenzisa iileta ukuze athimbe ingqalelo.
Ukuba ubeka ingqalelo, akukho mfanekiso ukhapha eso sivakalisi. Kwimeko apho awusazi isiNgesi lithetha ukuthi: "Ukwakha into enkulu kunathi kunye". Eli binzana lilo elibamba nabani na olibonayo, ngelixa inkampani, igama, ithotyiwe. ngokuba yenaokanye into oyifunayo kukuba elo binzana lihlale kwaye likhunjulwe. Kwaye nokuba inxulumene nenkampani.
Ukwenza njalo, umyili wenze uyilo lokuqala, kunye neemockups, kodwa wazinceda kumzobi wemiqondiso ukuze awugqibe umzobo oseludongeni kwaye iya kuba kanye njengoko wayeyicinge. Kwaye umphumo ucacile.
Imizekelo yokubhala kwiibhari nakwiindawo zokutyela
Sele ibe yifashoni kwiibhari kunye neeresityu ukuba zisebenzise ibhodi okanye eze-elektroniki “ukuzoba imenyu”. Kule meko, akwenzelwanga ukuba abantu bazi ukuba banokutya ntoni. Kungenjalo menze ukuba akonwabele uyilo olunomtsalane, olugqumayo aluthandayo kangangokuba kufuneka uzame into enye okanye ezininzi ezibhengezwe kuloo leta.
Enyanisweni, iileta ezinje zibonwa kwiimpapasho ezininzi, kwiibhari, kwiindawo zokutyela, ezijinga ngaphakathi, ezivezwe ngaphandle ukutsala umdla ... Kwaye inyaniso kukuba bayayifumana. Kungenxa yokuba ayingonobumba oqhelekileyo obhalwa ngesandla okanye oshicilelweyo. Uyinika ukubamba ngamagama kunye nemizobo emincinci ehamba nayo kwaye wonke umntu uyazi.
Inyaniso kukuba, kubomi bemihla ngemihla, ukubhala yinxalenye yako nokuba siyathanda okanye asithandi. Isindululo sethu kukuba uthathele ingqalelo. Uya kubona ukuba imini yonke ufumana imizekelo yokubhala, nokuba kukwi-t-shirts, kwiimagi, kwiibhari, kwiindawo zokutyela, kwiivenkile zefashoni, njl. Ke kutheni kungafanele ibe sisiphakamiso kumthengi wakho ukuba ayile into esebenzisa obu buchule?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » imizekelo yokubhala